အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား | Burmese Women's Union
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ(၁)ရက်နေ့ တွင်ကျရောက်သော ၁၁၈ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများနေ့ကို BWU နှင့် Famer and Labor Actvitist Group (FLAG) လယ်သမား အလုပ်သမားရေးရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော Labor Power Group (LPG), Action Labour Right (ALR), Let Help Each Other (LHO) နှင့် Yaung Chi Oo Worker Assoaciation (YCOWA) စသည့်အဖွဲ့အစည်းများတို့ ဖြင့် စုပေါင်းကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားကို မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ တိပိဋကပုလဲရောင်ရှိန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ကြကာ စက်ရုံအလုပ်သမားများ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်း၊ မီဒီယာများ ၊ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစသဖြင့် စုစုပေါင်း လူဦးရေ(၇၀၀)ကျော်တက် ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားသို့အထူးဖိတ်ကြားထားသော အမျိုးသားလွတ်တော်အမတ် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်သော ဒေါ်နော်လှလှစိုးမှ တက်ရောက်ပြီး အဖွင့်အမှတ်တရ စကားပြောကြားပေးခဲ့သည်။
Burmese Women’s Union co-organized the event of International Worker’s Day with the members of Farmer and Labor Activist Group(FLAG) inaBuddhist monastery at Minglardon township, Yangon. The event was hosted on the 1 May, 2018 and the special invited person who is the member of parliament and one of the secretary member of the parliamentary committee on the Women and Children’s Rights Committee Naw Susanna Hla Hla Soe made an opening speech on this occasion. The worker’s association, workers, media and CSOs, women’s organization were attended to the event with total number of about 700 people.